कुकुरका सामान - मुन्डो पेरोज | विश्व कुकुरहरु
कुकुरहरुको संसार धेरै विकसित भएको छ र आज हामीसँग छ हाम्रो दिनलाई दिन सजिलो बनाउन सबै प्रकारका चीजहरू तिनीहरुसँग। कुनै चीजको लागि होईन यो मान्छेको मिल्ने साथी हो, त्यसैले यो हामीले दिन सक्ने सम्पूर्ण हेरचाहको योग्य छ। हामी उनीहरूलाई दिन्छौं प्रयोगबाट सामान वर्गीकृत गर्न सक्दछौं, अधिक र अधिक चीजहरू प्रदान गर्ने संसारमा आफूलाई डुबाउने कामलाई सजिलो पार्न।
को सामानहरू कुकुरहरू द्वारा प्रयोग गरिएको लगभग एक दुनिया अलग छ, केवल कारणले गर्दा उपयोगिता कि यी रिपोर्ट छन्, तर पनि द्वारा सौन्दर्य। एन कुकुरहरु को विश्व हामी भर्खरको बारेमा सबै भन्दा राम्रो जानकारी पाउनेछौं प्रवृत्त क्यानाइन मामिलाहरूमा, बाट हार वा कुकुरहरु र वयस्क कुकुरहरु को लागी bibs, यदि एक कलर वा एक Correa, को उपयोग मुस, मोतियाबिंदको लागि intraocular लेन्स, छाता, रिपेलर वा टुथपेस्ट, कुकुरहरूका लागि समेत यौन खेलौना।
सबैको बारेमा कुरा गर्न कसरी असम्भव छ कुकुरका सामानहरू अवस्थित छन्, हामी कोटिहरू अनुसार केहीको बारेमा कुरा गर्नेछौं। सामानहरू जुन हामी दैनिक रूपमा प्रयोग गर्दछौं जुन तपाईंको स्वच्छताको लागि हो वा ती आश्चर्यजनक र नवीन पनि हुन्।
दैनिक लागि सहायक उपकरणहरू
दिनहुँ कुकुर संग सामानको सेट सामेल गर्दछ जुन आधारभूत पनि हुन्। कुकुर घर आउनु अघि हामीले केही घर तयार पारेको हुन्छ। त्यसैले हामी यी सामानहरू समीक्षा गर्न सक्दछौं कुकुर संग दिन प्रति दिन के आवश्यक छ को बारे मा स्पष्ट हुन। सुरु गर्न, आधारभूत चीज मध्ये एक हो कुकुर सुत्न सक्ने ठाउँमा राख्नुहोस्, जसको लागि हामीलाई एउटा चाहिन्छ कुकुरको ओछ्यान। हाल त्यहाँ असंख्य मोडेलहरू छन्। कपडाको साथ ओछ्यान, Leatherette तिनीहरूलाई सफा गर्न सजिलो बनाउन प्लास्टिक वा विकर खोल र विशेष गरी ती ओछ्यानहरू फोमले बनेका छन् र सबै कुकुरहरूका लागि सहज छन्। हामी गोलो वा आयताकार बेड र ओडिजहरू वास्तविक आकारका साथ किन्न सक्छौं। तर सबै भन्दा माथि हामीले कुकुरको साइजको बारेमा सोच्न पर्छ, त्यसैले ओछ्यान उसको लागि पर्याप्त आरामदायक छ।
अर्को सहयोगी जुन तिनीहरू प्रत्येक दिन प्रयोग गर्नेछन् को कुकुर फिडर र waterers। त्यहाँ प्लास्टिकहरू छन् तर धातुहरू जहिले पनि अधिक सिफारिश गरिन्छ, जुन निस्सन्देह धेरै लामो समय सम्म रहनेछ। सबै कुकुरका लागि सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छन् ती ती हुन् जुन खालमा कुकुरलाई फिडर तान्नबाट रोक्छ, खाँदा वा पिउँदा कुकुरहरूलाई फिडर तान्नबाट रोक्छ। अधिक परिष्कृत चीजहरू फेला पार्न पनि सम्भव छ, जस्तै फिडरहरू जसले आवश्यक अनुसार खाना प्रदान गर्दछ, तर यी केवल यदि हामी कुकुरलाई लामो समयसम्म एक्लै छोड्छौं भने मात्र प्रयोग गरिन्छ।
अर्कोतर्फ, कुकुरको लागि हिंड्न आवश्यक छ, त्यसैले हामीले गर्नु पर्छ उसलाई हिंड्नको लागि लिनको पट्टा र कलर वा दोहन किन्नुहोस्। यस बिन्दुमा सम्भावनाहरूको सम्पूर्ण संसार हाम्रो अगाडि खुल्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा एक किन्नु हो कुकुरहरु को लागी हार कि यो यसको आकारको लागि उपयुक्त छ कि यो भाग्न सक्दैन, कि यो आरामदायक छ र कुकुरले तान्यो र ठूलो छ भने यो मजबूत छ, ताकि यो टुक्रिन हुँदैन। खराब गुणस्तरको पट्टिबाट जोगिनु उत्तम छ जसले हामीलाई अधिक डराउँदछ। हार्नेस धेरै लोकप्रिय भएको छ तर कुकुरले धेरै तानिरहेको छ भने सिफारिस गरिदैन, किनभने यसले सम्पूर्ण शरीरलाई तान्ने बेला र घाँटी मात्र पछाडि छोड्दा पनि उसलाई ढिलो पार्दैन। पट्टि संग संयोजन मा, हामी पनि झोला होल्डर संग उत्सर्जन झोला को आवश्यकता छ, जो आज पाउन सजिलो छ।
को खेलौनाहरू पनि कुकुरको दैनिक जीवनको हिस्सा हुन्, त्यसैले हामी तपाईंलाई केहि खरीद गर्न सक्छौं। त्यहाँ धेरै प्रकारका छन्, बाट साना कुकुरहरु को लागी कोमल खेलौना तार वा हार्ड बलको साथ खेलौना गर्न। सब भन्दा खोजिने खेलौनाहरू हुन् जसले भित्र भित्र पुरस्कार लुकाउँदछन् र उनीहरूलाई लामो समयको लागि मनोरन्जन गर्न दिन्छन्।
जब हामी घरपालुवा जनावरहरूसँग यात्रामा जान्छौं हामीसँग केहि सामानहरू जोड्न पर्छ जुन वास्तवमै उपयोगी हुन्छ। ती मध्ये एक वाहक हो। हामीले तपाईलाई पहिले नै प्रकारका बारेमा बताइसकेका छौं कुकुर वाहक, त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो पाल्तु जनावर को लागी सबैभन्दा उपयुक्त छनौट गर्नु पर्छ, यो ब्याग हो, ब्याकप्याक वा धातु पिंजरा। धेरै ठाउँहरूमा यसलाई बोक्नु एक अनिवार्य आवश्यकता पनि हो, त्यसैले हामी कुकुरको साथ संसारभरि यात्रा गर्न चाहन्छौं भने हामीलाई एउटा चाहिन्छ।
La कार सीट को लागी कभर गर्नुहोस् यो अर्को ठूलो आविष्कार हो जुन सबैसँग पशुहरू छन् किन्नु पर्छ। सिट कभर जसले कुकुरलाई पछी घण्टा कार सफा गर्नबाट जोगिन मद्दत गर्दछ, विशेष गरी यदि यसले धेरै कपाल बगाएको छ। यो आरामदायक छ, राख्न सजिलो छ र असबाबको रक्षा गर्दछ, कुकुरले बान्ता गरे पनि। एकदमै आविष्कार
कुकुरहरु को लागी लुगा
को संसार कुकुरको लुगा यो पनि एक धेरै पूर्ण पोष्ट को लागी बनाउँछ। वर्तमानमा हामी फेला पार्दछौं कार्यात्मक प्रकार कुकुर लुगाहरूजस्तै रेनकोटहरू उनीहरूलाई वर्षाबाट बचाउन वा थोरै फरका कुकुरहरूका लागि तातो लुगाहरू। तर कुकुरको लुगा प्रयोग गर्न पनि एक प्रवृत्ति छ किनकि यो फेसनल छ, विशेष गरी साना नस्लहरूमा जसले आफूलाई सुन्दर डिजाइनहरूमा उधार दिन्छ। कुकुरका जुत्ताहरू देख्न पनि सामान्य छ, यद्यपि हिउँमा हिड्ने कुकुरहरूको अवस्थामा उनीहरू आफ्नो प्याडहरू जोगाउन आवश्यक छन्।
कुकुर स्वच्छता धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले हामीले बजारमा भएका सामानहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हुनेछ कुकुर कंघी। तपाईंको कपालको प्रकारको आधारमा हामीले एउटा वा अर्को किन्नुपर्दछ। त्यहाँ डबल-लेपित फरको लागि विशेष ब्रशेहरू छन्, लामो, घुमाउरो वा मोटा कपालका लागि। त्यहाँ पनि एक्सेसरीजहरू छन् जसले यस कार्यलाई सजिलो बनाउँदछ यदि हाम्रो कुकुरको छोटो र सामान्य कपाल छ भने, जो कि कम्मरमा मित्ने जस्ता।
यदि हामी ती मध्ये एक हौं हामी थोरै बचत गर्नका लागि घरमा हेयरड्रेसिंग गर्न चाहन्छौं, हामी एक किन्न सक्छौं कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।। त्यहाँ धेरै पूर्ण व्यक्तिहरू छन्, मेशिन, कैंची र विभिन्न टाउकोको साथ। यसको साथ हामी हाम्रो आफ्नै कुकुर को स्टाइलिस्ट हुन सक्छ।
सरसफाइको सामानहरूमा हामी अन्य धेरै चीजहरू फेला पार्न सक्छौं, जस्तैaदन्त सफा किट। यी प्रकारका चीजहरूले हाम्रो पाल्तु पशुको साथ जीवनको लागि सजिलो बनाउन र पशु चिकित्सकलाई भेट्न कम सघाउन मद्दत गर्दछ किनकि हामी उनीहरूको दाँत पूर्ण स्थितिमा राख्छौं।
आश्चर्यजनक कुकुरका सामानहरू
सामानहरू जुन आज उपलब्ध छन् त्यसले ठूलो संख्याको आवश्यकताहरू समेट्न सक्दछ। यदि हामीले अनलाइन स्टोरहरू खोज्यौं भने हामी धेरै चाखलाग्दो चीजहरू भेट्टाउनेछौं। उदाहरण को लागी, तपाई किन्न सक्नुहुन्छ un चपलता सहायक तपाईंको कुकुरले यस खेलमा प्रशिक्षण सुरू गर्न, वा केवल रमाइलो गर्न।
कुकुर नुहाउने सामानहरू: तपाईंको पाल्तु जनावर सफा र चम्किलो
द्वारा नाट सेरेजो बनाउँछ १ महिना .
तपाईंको कुकुरलाई नुहाउनु रमाईलो क्षण र परीक्षा दुवै हुन सक्छ (विशेष गरी यदि गरिबले यो मन पराउँदैन ...
कुकुरहरूको लागि व्यावहारिक र यातायात सामानहरू
चाहे तपाईं कुएन्का यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं टाढाको ब्ल्याक फरेस्ट भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, गर्मी आउँदैछ ...
कुकुर बलहरू, तपाईंको सबैभन्दा राम्रो साथीको लागि उत्तम
कुकुरहरूका लागि बलहरू यी जनावरहरूको अविभाज्य तत्व हुन्: हामीले तिनीहरूलाई कति पटक चलचित्रहरूमा देखेका छैनौं ...
पन्जा र नाकको लागि मोइस्चराइजिंग कुकुर क्रीम
द्वारा नाट सेरेजो बनाउँछ2महिना .
यद्यपि यो मूर्ख लाग्न सक्छ, कुकुरहरूको लागि मोइस्चराइजिंग क्रीम हाम्रो घरपालुवा जनावरको छाला कायम राख्न धेरै आवश्यक छ ...
कुकुरको दाँत माझ्ने माझ हाम्रो घरपालुवा जनावरको दाँतको स्वच्छता कायम राख्ने एउटा तरिका हो...
सबै प्रकारका सर्वश्रेष्ठ कुकुर पप स्कूपरहरू
कुकुर पप स्कूपरहरू सामान्यतया दुई प्रकारमा विभाजित हुन्छन्, तिनीहरू साना वा ठूला हुन् भन्ने आधारमा, तर…
सबै प्रकारको सर्वश्रेष्ठ कुकुर कम्बल
द्वारा नाट सेरेजो बनाउँछ3महिना .
कुकुरको कम्बलले सोफाको संरक्षकको रूपमा वा ओछ्यान बनाउनको लागि मात्र आफ्नो कार्य पूरा गर्दैन ...
कुकुरको खाजा: तपाईंको घरपालुवा जनावरको लागि स्वादिष्ट व्यवहार
द्वारा नाट सेरेजो बनाउँछ4महिना .
कुकुरको खाजा भनेको हामीले हाम्रो घरपालुवा जनावरलाई दिनहुँ दिने खाना पछि, एक नियमित भाग हो ...
कुकुर सीट बेल्ट
हाम्रो कुकुरलाई हामीसँग लैजाँदा कुकुरहरूको लागि सिट बेल्ट अनिवार्य छ।
कुकुरहरूका लागि उत्तम अन्डरप्याडहरू: तिनीहरू के हुन् र तपाइँको कुकुरलाई कसरी प्रयोग गर्ने
द्वारा नाट सेरेजो बनाउँछ5महिना .
कुकुर अन्डरप्याडका दुई मुख्य प्रकार्यहरू छन् (मुख्य रूपमा पिसाब वा पप गर्न प्रयोग गरिन्छ) र यसको लागि उपयोगी छन् ...
कुकुरहरूको लागि साइकल टोकरी, आफ्नो घरपालुवा जनावरलाई आराम र सुरक्षित रूपमा बोक्नुहोस्
साइकल चलाउने र पारिस्थितिकीका प्रशंसकहरूका लागि, कुकुरहरूको लागि साइकल टोकरी उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ ...
पिपेट के हो र यो केको लागि हो?